Faucet milentika ao an-dakozia Chrome miaraka amina mpitifitra manintona
Home / Fitaovana an-dakozia / Misintona Faucets / WOWOW Faucet milentika ao an-dakozia Chrome miaraka amina mpamafa tarika
WWOW Chrome an-dakozia mikotroka Faucet miaraka amin'ny mpantsongotra ala
naoty 4.95 avy tany 5 mifototra amin'ny 37 mpanjifa naoty
(37 mpanjifa famerenana)
Buy Foucet Single Handle dia manana fiasa mandeha ho azy. Ny fiverenan'ny valalabokanana misintona dia tratry ny volan'ny gravity (fantatra ihany koa fa bà gravité sy tantanana gravita).
2310800C torolàlana fametrahana
Esory ny paiso mifangaro vita amin'ny 2310800C
Mitady kromo mahazatra misintona baoritra mixer tap? Tsy hikaroka intsony! WOWOW dia manolotra anao ny iray amin'ireo tsara indrindra sy ny fisintonana horonam-bolo vita amin'ny paiso mifangaro izay ho hitanao eny an-tsena. Ny lanjan'ny vola dia tsy mihetsika, satria ny WOWOW dia mahalala ny fomba fanaovana fametahana fangaro amin'ny kojakoja avo lenta amin'ny vidiny mora vidy. Ankoatra izany, ny endrika tsy manam-paharoa izay mahatonga ny WOWOW's down down kitchen mixer dia manapoka kitapo-maso any an-dakozia. Rehefa misafidy ny fananganana lakozia mahazatra ianao, na ny famolavolana an-dakozia maoderina, dia mety ho tafiditra ao anatiny ilay paompy mixer an-dakozia.
Isaky ny mikasa ny hamorona ny WOWOW dia mamolavola ny paiso mifangaro amin'ny lakozia izay mahavariana ny ankamaroan'ny olona. Ny WOWOW dia te-hamolavola fantsom-basy vita amin'ny maso vita amin'ny maso mifangaro izay mampisy fiovana eo amin'ny lakozia rehetra. Ny olona sasany dia manamaivana ny fiantraikan'ny paiso mifangaro amin'ny lakozia, satria manisy fiovana lehibe eo amin'ny lakozia rehetra izy ireo. Ny kitapo mixer amin'ny lakozia dia afaka manampy fampitaovana manokana amin'ny lakozia rehetra. Ireo mpamorona ao amin'ny WOWOW dia mahalala tsara an'io. Tsy misy na inona na inona amin'ny fisintonana horonam-baravarana ao amin'ny WOWOW dia amidy amin'ny mpanjifa manerana izao tontolo izao.
Practical misintona kobam-basy mifangaro vilia
Ny fisintonana horonam-baravarankely vita amin'ny WOWOW dia manasongadina ny tombony azon'ny hosotra ny rano mora misintona ny paompy mixer an-dakozia. Amin'ny ankapobeny dia mampitombo ny faritra flushing anao amin'ny 15 ka hatramin'ny 23 santimetatra. Ny hosotra rano azo misintona dia afaka misintona mora ampiasaina, hampitomboana ny faritra fandroana lehibe. Isaky ny zoro amin'ny lakozian'ny lakoziao, fa sarotra kokoa ny hanatratrarana miaraka amin'ny paiso mifangaro amin'ny lakozia, afaka manadio mora foana izao. Azo esorina moramora ny hosotra misy rano sy aorian'ny fampiasana azy, dia hisintona ho azy amin'ny toerana misy azy io avy hatrany.
Ny endri-javatra iray hafa mampiavaka ny fisintahana ny famonosana an-dakozia an'ny WOWOW dia ny fantsom-bolam-baravarana izay afaka mamindra 360 degre. Izany no mahatonga ireo fikorotanan-tsavom-baravarankely itobiana ireo izay ilaina indrindra amin'ny fandriam-baravarankely indroa. Amin'izany fomba izany dia mora ny miova avy amin'ny fatin'ny lakozia iray mankany amin'ny iray hafa. Mahatsiaro ho malefaka hampandehanana ireo kofehy mixer amin'ny famonosana ity satria mampiasa fitaovana ambony kalitao ny WOWOW amin'ny fisintonana azy amin'ny fametahana fametahana ao an-dakozia. Tsikaritrareo ny fahasamihafana eo noho eo raha toa ianao ka mandefa ny maimaim-basy amin'ny mixing WOWOW.
3-mody manintona paompy kely mifangaro vilia
Ny fisintona kodiarana mixer an'ny WOWOW dia azo tanterahana amin'ny boka iray manana kalitao tokana. Ny rano mafana sy mangatsiaka dia azo afangaro amin'ny tanana tokana mandra-pahatongany ny mari-pana tsara. Ary izany koa dia mihatra amin'ny volan'ny rano. Amin'izany fomba izany dia hitandrina foana ny tanana iray ianao mba hanaovana asa hafa any an-dakozia. Ny baoritra misy seramika tsy misy rano dia manome antoka tsara indrindra. Noho ny tombo-kase nataony dia mihodina tsara ilay vovoka ary miantoka ny fampiasana maharitra mandritra ny fotoana tsy misy rano mitete na leisy. Ary ambonin'izany rehetra izany, manome antoka tsara ny fanaraha-maso marina sy tsy misy fepetra ny mari-pana amin'ny rano tsy misy fihemorana.
Ny fikoronan'i WOWOW amin'ny fikapohana an-dakozia dia manolotra kasety mifangaro an-dakozia telo. Ankoatra ny fantsom-peo mahazatra, dia afaka misafidy ihany koa ianao amin'ny fantsom-panafody na modely aqua-blade. Ity mode aqua-blade ity dia manome anao rano mafana be, izay afaka manetsika ny fofon-tsakafo rehetra avy amin'ny takelaka na ny lakozian'ny lakozia. Io fiasa io dia miavaka eny an-tsena ary azo antoka fa tombony amin'ny fikorahana fisotroan-tsofina vita amin'ny WOWOW noho ny fisintonana paompy hafa amin'ny fametahana fatina. Azonao atao ny mamadika fotsiny ny fiasan'ny rano amin'ny fikasihana ny bokotra, izay apetraka mora eo amin'ny loham-panjakan'ny fantsom-baravarankely afangaro.
Manintona tapitra mpangaro lovia avo lenta
Araka ny efa nolazaina teo aloha, ny WOWOW dia mahafantatra tsara ny maha-zava-dehibe ny kalitao manintona ny kaopy mixer an-dakozia. Izany no antony mahatonga ny WOWOW mampiasa fitaovana avo lenta izay mihoatra ny fenitry ny indostria ankapobeny. Mieritrereta ireo fizotran'ny lozisialy fanodinkodinam-bidy, fofona malaza eran-tany toa ny aoperate Neoperl, ary ny fitaovana vy. Just hiantohana anao hampiasa ny vokatra tsara indrindra fampisehoana maharitra mandritra ny fotoana ela. Noho izany WOWOW dia afaka manolotra anao alàlana ny vokatra 3 taona amin'ny tsindry hazo fisakafoanana mixer. Ary ambonin'izany rehetra izany, amin'ny WOWOW dia azonay antoka fa mbola hiverenanao indray izahay, satria ny ankamaroan'ny mpanjifantsika dia mijanona ho mpanjifa mahatoky mandritra ny fiainana noho ny lanja ambanin'ny vola azontsika.
Ny volon-doko azo esorina amin'ny lakozia fantsom-bolan'ny mpanentana avo lenta dia mora esorina na soloina. Amin'izany fomba izany dia afaka manadio sy mihazona ny làm-bitan'ity fantsom-bifangaro mora ireto ianao, ary esory ny sisa tavela amin'ny rano izay vanim-potoana fanangonana. Ny fampihenan'ny WOWOW ny fantsom-bary mifangaro vilia dia mety indrindra ho an'ny rafitry ny tsindry avo. Ny hosotra rano silika mora ampiasaina dia manome fandidiana milamina sy maharitra ela.
Fametrahana tariby paorao fandrefesana paompy
Ny fisintonana koban'ny mpanotrona any an-dakozia WOWOW dia azo ampidirina ao anaty efitrano fandriaka an-dakozia 1 na 3. Ny kitapom-baravarana haingam-pandriana ao ambanin'ny lakozia no omena miaraka amin'ny kitapo fametrahana feno. Miaraka amin'ny vy vita amin'ny metaly izay voapetaka takelaka rakotra daholo ny lavaka, dia ho azo antoka ianao hametahana taper mixer ao an-dakozia. Mba hahafahanao mametraka ireo fivarotam-bolo any an-dakozia dia mametaka ny tenanao, tafiditra ao anaty fonosana ny fitaovana rehetra. Azonao atao ny mamarana ny fametrahana ny kitapom-bolan'ny mpangaro lovia toy ny rivotra mangatsiaka. Miaraka amin'ny horonantsary fivoriambe dia afaka mamita mora ny fametrahana ianao ao anatin'ny 30 minitra. Izy io dia hamonjy plumber lafo vidy!
Ankoatra ny fotoam-pankasitrahana feno 3-taona omen'ny WOWOW anao rehefa mividy ireo horonam-basy fanakaloana any an-dakozia ianao, dia manome anao vola famerenam-bola 90 andro koa ianao. Raha tsy ho taitra amin'ny vidin'ny vola azonao ianao amin'ny fividianana ireo horonam-baravarankely milina fampidinana an-dakozia, azonao atao ny mamerina ny fisintonana ny fantsom-baravarankely milina izay tsy misy fanelingelenana. Hahazo famerenam-bola feno ianao nefa tsy misy fanontaniana.
Ny tombony azo avy amin'ny paompy mitsako an-dakozia amin'ny fomba fohy
· Manome fangarom-bava any an-dakozia
· Famoronana mahazatra sy mbola ankehitriny
· Fitaovana rano 3, anisan'izany ny feta aqua-pressure
· Vita amin'ny fitaovana avo lenta
· Fampidirina kitapo fametrahana azy io
· Antoka-miverina amin'ny 90 andro
· Garantiana 3 taona
SKU: 2310800C Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Misintona Faucets Tags: 1 Tolefo, Chrome, Misintona midina
Fomba maodely telo: maodely famafazana / fomba mikoriana / fomba fanafazana
Nahazo an'ity hisolo ny cozet faucet fohy / ambany misy fotoan-tsarotra antsika manasa ireo vilany avo / avo ary tsara daholo ny zavatra rehetra..ny hany tokana soloiko dia ny fametrahana ny mafana sy ny mangatsiaka, ny maivana dia manintona anao dia ny mafana ary tsy tiako izany coz manan-janaka aho ka nampifandraisiko tamin'ny fantsom-panafana ny fantsona manga ny fantsona mena amin'ny valizy mangatsiaka..ny zavatra hafa rehetra dia mividy tsara tokoa.
Mila manova faucet an-dakozia taloha aho, tsara ny vidiny, ka nividy tsy nisalasala aho. Mahafatifaty ilay sprayer misintona sy fikirana 3! Fifanarahana tena mahafa-po!
A l ***2020-04-08
Mijery sy mahatsapa tena mahafinaritra.
Vao avy nametraka ilay faucet tao an-dakozako aho. Mora apetraka ary tsy mila miantso matihanina. Mora ny misintona ny tsifotra sprayer ary avelao hiakatra ao anaty tahony izy io. Vao nitranga ny fifandraisan'ny mpamatsy ahy dia mitovy amin'ny haben'ity singa ity. Ho an'ny teboka vidiny, tena tsara izany.
Mampitaha an'io faucet io amin'ny anarana lehibe toa an'i Morn, Delta, sns. Ny fahatsapana sy ny bika dia azo ampitahaina. Mora mifehy ny tsindry rano sy ny mari-pana io faucet io.
Tena tiako io!
C *** ny2020-04-10
Tsara ny fifampiraharahana ary ny kalitao dia tsara toy ny faucets lafo kokoa ihany koa, nametraka ity faucet ity teo amin'ny fitoeran'ny lakozianay izahay. Fametrahana mora izy io ary nanjary tsy nisy kilema nanomboka teo. Ny famaranana dia tena mora diovina, manohitra ny rangotra. Izy io dia manana toerana famafazana sprayer ary miasa tsara koa ilay sprayer, tsy misy mivoaka na mihantona. Tianay ity faucet vaovao ity.
Taorian'ny namakiako ny hevitra rehetra dia nanapa-kevitra aho fa hanandrana ity faucet ity. Ho an'ny $$$ dia toa mendrika izany. Oay! Faly be izahay amin'ity faucet ity. Mbola tsy mino ny kalitaon'ny vidiny. Hanoro hevitra an'ity faucet ity ho an'izay mitady hanatsara na amin'ny teti-bola na tsia. Sarobidy, bika tsara. Fampiasana lehibe.
Faucet tsara amin'ny vidiny lafo! Nividy faucet ho an'ny rafozam-baviko tato ho ato aho tamin'ny fivarotana enta-mavesatra lehibe tokony ho roa heny noho ny vidin'ity faucet ity. Azoko antoka fa ny kalitaon'ity faucet ity sy ny hametrahana azy dia tsara kokoa noho ilay novidiko teo aloha. Izy io dia misy tsipika rano - soloina foana ny lalan-dranoo !!! Ary ny fametrahana ny lanjany dia mora apetraka. Amin'ny ankapobeny tena faly amin'ny faucet.
Nohavaozina ny tranoko, noho izany dia mila ity faucet ity aho. Miasa araka ny nandrasana. Tsy misy na inona na inona itarainana momba azy io, dia vokatra tsotra nefa mandeha tsara! Tena manafaka toerana be dia be eo amin'ny latabatra rehefa te-manasa lovia na roa na zavatra tsy azo antoka amin'ny fanasana vilia aho.
Somary nisalasala ihany aho tamin'ny vidiny ary ny tena tsy marika anarana lehibe. Matahotra foana aho noho ny famakiana ny fantson-drano mifandraika amin'ny plumbing, satria handany vola aman'arivony ianao hanamboarana ny simba izay vokatra 20 $ na 30 $ fanampiny azo notahirizina. Na izany aza, vokatra tsara io! Ny faucet nataoko American Standard taloha dia vaky tamin'ny vozona misy kofehy, avy amin'ny harafesina. Azo inoana fa efa niparitaka nandritra ny fotoana kelikely ilay gasket, ary nesorina tamiko koa ireo visy. Tamin'ny farany dia voatery nanapaka ireo fantson-drano taloha aho ary namaky ny fantsona sisa hivoahana. Izany dia karazana nofy ratsy, ary nanantena fa tsy ho fisandohan'ilay zavatra iaretako izany. Saingy tsy izany. Ny fametrahana an'io dia mandeha tsara sy mora. Ny fantsonako dia manana fametahana lavaka telo ka ny lovia fototra no nampiasako. Tiako ireo lasantsy vita amin'ny plaka ifotony fa tsy ireo plastika manify azonao matetika. Nandritra ny fotoana nanodinkodinako ny zavatra dia hitanao fa tena nanisy tombo-kase ny zavatra ilay foam ary nanjavona tsy ho hitan'ny masonao. Azoko antoka fa tsy ho harafesina toy ny taloha ity. Tena tiako ihany koa ny farany, tsy manao dokambarotra fa mahazaka toerana izy io saingy tsy mahazo teboka na dian-tanana intsony. Angamba satria matevina izy fa tsy nikela? Tsy azoko antoka, fa nahafinaritra ny nahita sy tsy nampoizina tamin'ity vidiny ity.
Ny ahiako fotsiny dia ny rehefa esoriko ny spout hanasana lovia ilay faucet / sinko ao anaty lavaka kely. Mety ho noho ny filentehako lasa tsy manify ihany koa. Tsy dia saro-kenatra amin'ny entako aho ka tsy dia miahiahy loatra fa zavatra tsy ataoko ao an-tsaiko io rehefa manasa lovia aho. (Mitandrema sao sanatria.)
Ampahafantariko an'iza na iza ity! Maninona no mandany $ 100… $ 150… $ 200 amin'ny faucet ao amin'ny magazay lehibe raha afaka mahazo izany amin'ny ampahany kely amin'ny vidiny ianao ??
S *** f2020-05-04
Talohan'ny nividianako an'ity vokatra ity dia namaky fanamarihana maromaro momba ny traikefa ratsy avy amin'ny mpanjifa hafa aho izay nitondra ity vokatra ity. Na izany aza, nanapa-kevitra ny hanandrana aho ary hatreto (3 andro fampiasana fotsiny) dia mandeha tsara ny zava-drehetra fa tsy misy olana tafavoaka.
Ekeko fa niady tamin'ny fametahana kely aho, saingy tsy hadisoan'ity vokatra ity izany. Mazava be ny torolalana, nanana nofy ratsy fotsiny aho ka nesoriko daholo ny fantsonay taloha ary nesorina. Raha vantany vao nandalo an'io sakana io aho dia mora be ny fametrahana faucet vaovao.
Raha ny zava-bita, ny lohan-tsifotra malalaka dia misy fanerena lehibe ho ahy. Na izany aza, ny tsindry eo amin'ny sehatra "stream" toa somary ambany. Tsy haiko raha olana amin'ny faucet na amin'ny famatsian-drano ity. Na izany na tsy izany dia tsy olana lehibe izany satria tiako kokoa ny mitazona azy eo amin'ny tsifotra malalaka.
Na izany na tsy izany, tamin'ny ankapobeny dia navoakako ity vokatra ity noho ny sandany, ny fametrahana mora azy ary ny fijery tsara. Raha manana olana aho amin'ny ho avy dia hanitsy ny hevitro aho mba hanehoako azy amin'ny fanavaozana.
M *** f2020-05-19
Raha manofa toerana ianao, ity dia fomba tsara hanatsarana ny fantsom-panafody mahazatra izay matetika no tsy dia tsara loatra miaraka amin'ny hofan-trano. Azonao atao ny mamerina ilay faucet taloha alohan'ny andehananao. Ity faucet ity dia, mora be ny nifindra tao anatiny, tsy naka fotoana mihitsy ilay hubby. Ilay fantson-tsika izay niaraka tamin'ny lakozia dia tsy nisy sprayer sy spout fohy nipetraka teo akaikin'ny ao anaty fantsakana ka na dia lovia roa monja aza no ao amin'ilay sink, dia sarotra ny nanasa azy ireo. Ity faucet ity dia miolakolaka kokoa amin'ny LALANA manome antsika efitrano bebe kokoa, miampy sprayer izay tokony ho fari-paharazana ho an'ny faucet / milentika rehetra amin'ny andro maoderina. Azo antoka fa mpamadika lalao io, nanamora ny fanadiovana ary mora ny miova raha miala amin'ny hofan-trano isika ary maniry ny hamerina azy.
Nividy an'ity mba hanatsarana ny fanavaozana sasany ho fanofana.
Matetika ireo karazana fantsona midina ireo dia $ 100 + avy amin'ny homedepot sy Lowes ka nino aho fa tsara kalitao ity.
Mila milaza aho fa tena talanjona amin'ny kalitaon'ny vola, ny lanjany dia sarotra be ny misintona ny faucet. Miasa mahafinaritra ireo fomba roa ireo saingy ny bokotra fiatoana dia misy daka azoko atao raha maheno tsindry miverina ao amin'ny fantsona fa tsy ampy izany fa tena miahiahy momba izany aho.
Ny fananganana vy dia tena mahavariana amin'ity vidiny ity ary tsy misy singa mahatsapa marefo.
Mora ny fametrahana azy, ny ampahany sarotra fotsiny dia ny visy izay mametaka ny tombo-kase ao ambanin'ny filentehana. Raha manana biriky maivana na fandavahana maivana ianao dia tsy olana loatra izany.
Amin'ny ankapobeny ity zavatra ity dia ho hitako fa hividy indray ho an'ny mpanofa trano hafa fa mieritreritra fa maharitra fitsapana ny fotoana ity iray ity!
Nividy iray hafa ho an'ny singa hafa, tena mora ny nametraka ary naka 30mins teo ho eo niaraka tamin'ny fandavahana herinaratra mba hanamafisana ireo visy napetraka ao ambanin'ilay filentehana.
Tsy dia lalina loatra ny filentehanay ary tadiaviko fomba mora kokoa hamenoana ny vilany. Tena tiako ny manana setting-2 sy stream ary spray! Nametraka an'ity (niaraka tamin'ny fanelingelenana) teo ambanin'ny adiny iray aho. Ny vozon'akanjo fanidiana dia misy banga izay mamela azy hitohy nefa tsy mila bibilava manakatra ny fantson-drano. Endri-javatra tsara iray amin'ny fametrahana azy ireo dia voamarika amin'ny manga sy mena ireo fantsom-panafody, mahatonga ny hookup ho rivotra. Izaho dia nijery fivarotana boaty ho an'ity karazana faucet ity. Ny vidin'entana azo ampitahaina dia nanery ny fetran'ny tetibolako. Ity faucet ity dia misy ny fiasa rehetra tadiaviko ary vokatra mafy orina izy io. Vidiny lafo, faucet tsara ary faly aho fa nividy an'ity!
Tiako ity faucet mora apetraka ity izay miasa tena mety tsara amin'ny fitoerako an-dakozia tsy vita izay lafo be te-hividy iray hafa ho fanomezana.
Ity faucet ity dia natao hanamboarana lakozia tsy maharitra rehefa manavao ny anay izahay. Tianay tokoa izany ka hampiasainay amin'ny toerana vaovao. Tena matanjaka, fananganana kalitao, tsy misy plastika. Ampy ny halavany, mora apetraka, mora ampiasaina, ary mora miovaova avy amin'ny nozongo. Ary izy rehetra dia amin'ny ampahany amin'ny vidin'ny marika "anarana", izay matetika vita amin'ny plastika maro. Faucet tsara ho an'ny $$.
Somary natahotra aho sao ho “plastika mora” io nefa tsy izany! Manamboatra ny lakozianako aho ary tsara be ilay faucet !!! Tiako ny manova ny tsindry rano ary miato kely aza ny fikorianan'ny rano rehefa manasa savony ireo lovia izay mamonjy rano sy vola amin'ny faktiorako rano. Manana dobo roa sosona aho ka lehibe sy mety.
Tena nividy tena tsara izany. Tena mora ny nametraka azy io. Ny ampahany sarotra indrindra dia ny fanesorana ny lalao farany satria efa antitra sy feno loatra. Fa ity lalao ity dia tena malama, mora natambatra, ary mety nitaky antsasak'adiny aho tamin'ny farany, anisan'izany ny fanadiovana, mba hosoloina ilay zavatra rehetra. Tena faly amin'ny fampiasana sy ny fahaizana mifindra avy amin'ny mafana ka hatramin'ny hatsiaka, ny famafazana ary ny fihenjana. Manan-tsaina ny baolina milanja. Tiavo ity teknolojia ity sy ny fomba itondran'ny fanavaozana antsika fari-piainana tsaratsara kokoa sy mora vidy kokoa.
A *** f2020-06-27
Tena talanjona amin'ny unit. Tsara ny famaranana. Ny hany zavatra tokony hilazako azy dia ny sombin-tànana tena saro-pady ary mila mitandrina ny olona rehefa mandrehitra faucet satria mety hahazo hery kely kokoa noho ny ilaina ianao. Raha tsy izany dia gaga aho tamin'ny orinasa sy ny fanarahan-dia izay nataon'izy ireo tamin'ny vokatr'izy ireo. Tena hividy indray raha ilaina izany.
L l ***2020-06-29
Tiako ny faucet vaovao! Napetrako halina. Tsy dia sarotra loatra izany raha tsy ny fametahana ny fantson-drano amin'ilay fametahana. Raha azonao atao dia apetaho alohan'ny hametrahanao ny faucet amin'ny toerany. Sarotra kokoa ny nanao ahy satria tery ny toerana ao ambanin'ilay filentehako. Ankoatr'izay dia nandeha soa aman-tsara ary tiako ilay faucet vaovao!
Faly be aho amin'ity vokatra ity. Mora ny nametraka. Manana ankizy kely izahay ary mora ho azy ireo ihany koa ny mampiasa azy. Nanaraka ny torohevitry ny mpandinika iray ihany koa izahay ary nanova ny fifandraisana mafana / hatsiaka mba hampihemotra ny hatsiaka sy ny hatsiaka mba hirosoana ny mafana. Miasa tsara ary tena hanome toro-hevitra an'ity vokatra ity aho !!
B l ***2020-07-06
Te-hanolo ny faucet taloha tao an-dakozia nandritra ny fotoana fohy aho izao. Tena tsara tarehy ity seta ity ary tena mandaitra! Fomba kely nanodinkodinana ny fametrahana (indrindra ilay ampahany rehefa tsy maintsy nanenjana ilay vilanin-drano aho - tamin'ny farany dia voatery nangataka fanampiana tamin'olona), saingy azoko ihany ilay izy ary mandeha tsara ilay faucet! Tiako ilay lohana faucet azo esorina noho ny famafazany ny kovetabe. Ny set dia tonga miaraka amina fonon-tànana vita amin'ny landihazo fotsy na dia tsy azony antoka tsara hoe inona izany. Tena tsara ny fonosana, ary faly be tamin'ny fividianako aho!
J *** f2020-07-09
Tena tsy nampoiziko ho tsara toy izao ny faucet amin'ity vidiny ity. Hitako ny olona sasany mitaraina amin'ny fahatsapan'ny plastika an'ilay fitaovana. ny fitaovana dia tsy mahatsapa lafo vidy fa izany no azontsika antenaina ho an'ny vokatra amin'izao vidiny izao. Ny fitaovana dia toy ny vy tsy misy fangarony fa maivana kokoa noho izany. Ny fotoana ihany no afaka mamaly raha maharitra. Ny faucet dia misy lohany miitatra toa ny ankamaroan'ny faucet hafa fa heveriko fa tsy nampiasa loharano izy ireo ka tsy mihemotra haingana toy ny hafa ny loha. Na izany aza, dia mbola mandeha tsara ihany. Tonga tamin'ny vokatra tonga lafatra ny vokatra, tsara ny fonosana. Manoro hevitra fatratra raha mitady faucet mora vidy ianao!
Vao nifindra tamina trano vaovao aho ary efa antitra ny vilany an-dakozia taloha ary voarangotra ary harafesina. Rehefa avy nandoko aho dia nametraka ity faucet vaovao ity. Manome azy endrika maoderina io ary tiako ilay spray spray. Mora ny nametraka azy (araho fotsiny ny lalana).
A T ***2020-07-17
Io dia fijery sy fiasa rehetra. Manintona be koa. Mandeha avy any amin'ny famaranana chrome mahazatra, fantsona roa, faucet ao an-dakozia ambany mankany amin'ny mifanohitra amin'izay dia mahafinaritra! Mifaninana ny vidiny. Mora mivaona. Tena faly tamin'ity fividianana ity.
M *** ny2020-07-19
faucet tsara tarehy, miasa tsara
Tena manoro hevitra aho
Miasa tsara. Sanda mahatalanjona amin'ny vidiny. Te-hanova ny faucet-nay mandrakizay aho ary ity iray ity dia miasa ary tsara tarehy. Tsy mihantona ny sprayer. Hamarino tsara fa manana ny lanjan'ny mpanohitra apetraka tsara.
Ny faucet dia vokatra mahafinaritra. Mora apetraka raha toa ka mora ny miasa miaraka amin'ny rafitry ny fantsonao. Ho ahy dia mila mandry amin'ny tany aho hametrahana azy. Fa mendrika izany.
Mila milaza amin'ny vidiny aho fa tsy azoko antoka ny fividianana an'io fa azoko antoka fa faly aho fa mora ny nametraka asa tena araka ny nampoizina ary tsara toa ireo faucets avo lenta ary tokony hiteny aho hoe aza manoratra famerenana matetika satria manadino aho ka raha mandany fotoana aho hanoratana an'io dia midika fotsiny izany fa mendrika izany ary tiako ny olon-kafa hahita teti-bola fa tsy manapotika ny banky mandritra ny fanamboarana ny tranonao
Vidiny tsara ho an'ny faucet tsara. Tena tiako ilay fiasa "fiatoana". Tena mora ny nametraka. Ity no faucet faharoa azoko tamin'ity orinasa ity, ary samy mahafinaritra izy roa!
Faucet mendrika ny vola. Fametrahana tsotra, tsy mila paipaipaipaipaoka ary tsy misy fivoahana. Izahay dia mijery hifindra ao anatin'ny herintaona ary fanavaozana mora vidy ho an'ny lakozia ity
*** B E2020-08-
Novakiako ny tsikera ary nanararaotra aho ary azoko antoka fa nahafantatra izany aho, fanatsarana mahatalanjona ho an'ny lakozianay io ary tsy mampino ny vidiny raha ampitahaina amin'ireo magazay boaty lehibe.
Fividianana tena tsara tokoa. Toa tena lafo, classy ary mampiakatra ny lakozia. Mahafinaritra ny fanitarana. Tiavo ny farany. Naniry an'ity ny reniko ary afa-po noho ny afa-po izy.
Izay nilain'ny labozy fanasan-damba lalina fotsiny. Fitaovana mora apetraka ihany no mora azo apetraka. Mpamily Phillips. Voafatotra tsy misy famoahana ary faly ny sakany.
Namelombelona ny lakozianako ity faucet ity! Vita tsara ary mora hapetraka! Tsy nisy fivoahana zero na olana hatreto! Izaho dia mandrisika !
Tiako ny faucet vaovao novidiko 2 ho an'ny tranoko ary ny iray ho an'ny trano fonenako. Tsara be izy ireo ary mahatsikaiky ny asany!
Mora apetraka, ampidirina izay rehetra ilainao. Sarobidy tokoa amin'ny vola, aza avela hampatahotra anao ny vidiny ambany!
M *** f2020-09-03
Olona mahazatra isika izay tsy misy fantsona fanampiny toy ny rafitra fanadiovan-drano - fametrahana mora izany. Izaho koa dia manana talantalana eny an-dalana ka tsy afaka mandeha any amin'ny toerana tena izy ny lanjany dia alao antoka fa eo ambanin'ny fantsonao dia mazava fa hanamora kokoa ny asa izany. Ny Faucet dia manjelanjelatra sy voaravaka tsara. Tena tiako izany
Nividy ity faucet ity aho hanavaozana ny fatana lakozia. Nandoa olona aho hametraka izany ho ahy ary faly aho fa nanao izany. Miantsena manodidina aho. Faucets tsara tarehy.